Xeebaha Liibiya waxaa laga raadinayaa Tahriibayaal Soomaali | Axadle
Xeebaha Liibiya waxaa laga raadinayaa Tahriibayaal Soomaali
Hay’adda Socdaalka Adduunka ee (IOM) ayaa sheegtay in Jimcihii ay rogmatay doon ay la socdeen tahriibayaal ka tagay Xeebaha Dalka Liibiya, waxaana la xaqiijiyay Geerida 3-ruux, halka raq iyo ruux lagu waayay 13-kale.
IOM ayaa sheegtay in doontaan oo ka tagtay Xeebaha Liibiya ay afka gelisay Badda Mediterranean-ka, dadaal lagu raadinayo nolol ama geeri dadka dadkaan ayaa ka socda xeebaha dalkaan dhaca Waqooyiga Afrika.
Kalluumeysato Liibiyaan ah ayaa oo wadatay Doon ayaa Khamiistii aragtay dhacdadaan, waxa ay wargelisay Hay’adda Socdaalka Adduunka (IOM), dad qaar ayaa lasoo badbaadiyay, halka kuwo kale la raadinayo.
Dhalashada dadkaan waxa ay kala yihiin: Masar, Bangladesh, Suuriya, Soomaaliya & Ghana, balse dadka dhintay ee la helay jirkooda waxaa ku jira Nin iyo Haweeney u dhashay Dalka Suuriya, balse qofka saddexaad lama sheegin Jinsiyaddiisa.
Markab ay adeegsato IOM ayaa u dhaqaaqay baadi-goobka dadkaan si loo helo tirada dadka la helay liiskooda ee la waayay, si aas loogu sameeyo Gudaha waddankaan marinka silica iyo lacagaha madax furashada lagu bixiyay noqday ee Liibiya.
Dowladdii awoodda badneen ee Liibiya ayaa dhacday sanadkii 2011-kii, kadib markii kacdoonka Guga carabta ee saameyay madax muddo dheer ka talineysay Dalalka Carabta lagu riday, waxaana la dilay Hoggaamiyihii dalkaas Mocammar Qadaafi oo ku baxay Gacanta Howlgalka NATO.
Safa Msehli oo ah Afhayeenad u hadashay Hay’adda IOM ayaa musiibo ku tilmaamtay dadkaan dhalinyarada u badan ee ku dhamaanaya Xeebaha Liibiya, dalalka ay kasoo jeedaan dadkaan waxa ay ugu baaqday in ay maareeyaan si ugu yaraan hamiga halista badan looga saaro.
Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegay in Tahriibayaasha ku haminaya Yurub ee ka safra Liibiya loo geysto dhibaatooyin jirdil u badan si looga helo lacagaha madax furashada ah oo ay ka qaataan kooxaha loo yaqaan Magafayaasha.
Sanadkii tagay, in ka badan 100,000 oo tahriibayaal ah ayaa ka gudbay Biyaha Mediterranean-ka halka 1,200 ay dhinteen iyaga oo isku dayay Tahriibkaas sida ay diiwaangelisay Hay’adda Socdaalka Adduunka.
Lafta gareen & Deni oo ku heshiiyay Amniga, Iskaashiga & Is
Kenya waxa ay raadineysaa 3-ruux oo Al-Shabaab Gaari kala